बालुवाटारको जग्गा कसरी आफ्नो नाममा आयो, सुवर्ण समशेर परिवारको विज्ञप्ती
काठमाडौं । बालुवाटारको बहुचर्चित जग्गा प्रकरणमा साबिक जग्गाधनी सुवर्ण शमसेरका परिवारले मुख खोलेका छन् । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्ण शमसेरका छोरा रुक्म शमसेरसहित तीनजना हकवालाले तत्कालीन सरकारको निर्णय तथा..
आज पनि मेघगर्जन र हुरीबताससहित पानी पर्ने
काठमाडौँ । उपत्यकासहित मध्य क्षेत्रको केही ठाउँमा बिहीबार पनि बेलुकीतिर हुरीबतास चल्ने मौसमविद्ले अनुमान गरेका छन् । भारतको विहार र पश्चिम बंगालमा बनेको न्यूनचापीय क्षेत्र तथा पश्चिमी र स्थानीय वायुको प्रभावले..
कुमारी बैंकको नाफा ३६ प्रतिशतले बढ्यो, कमायो १ अर्ब बढि नाफा
काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेडले चालू आर्थिक वषैको त्रैस्रो त्रैमाससम्ममा १ अर्ब ३२ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । यो बैंकले गरेको यस्तो नाफा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ३६.२५..
सिंहदरबारकै ४६ रोपनी जग्गा अतिक्रमण, किन मिचियो सिंहदरबार ?
काठमाडौं । सिंहदरबारको पूर्व अनामनगरतर्फ कुलो र गोरेटो मात्रै थियो । ०४७ मा सडक निर्माण योजना बन्यो । सडक बनाउँदा चल्तीको गोरेटोलाई केन्द्र मानेर दुवैतर्फ बराबरी जग्गा उपयोग गर्नुपर्नेमा शतप्रतिशत..
खुलामञ्च कब्जा प्रकरणः भेटवालका गुरु कांग्रेस नेता सिंह रहेको खुलासा
काठमाडौं । खुलामञ्च कब्जा गरेर सटर बनाइ भाडामा लगाउने विवादित ठेकेदार मनोज भेटवालले नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् तत्कालीन उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई प्रलोभनमा पारेर रत्नपार्क (पुरानो बसपार्क) बस..
शक्तिशाली चक्रवात उत्तर–पश्चिम दिशातर्फ लाग्यो, सतर्क रहन मौसमविद्को आग्रह
काठमाडौँ । बङ्गालको खाडीको दक्षिण पूर्वीभागमा भएको धेरै शक्तिशाली चक्रवात, फानी, बिस्तारै उत्तर–पश्चिम दिशातर्फ बढिरहेकाले देशको हिमाली भू–भागमा भारी हिमपात तथा पूर्वी र मध्यका केही स्थानका हावाहुरीसहित वर्षाको सम्भावना रहेको..
यसरी हुँदैंछ नयाँ शक्ति र फोरमबीच २३ गते पार्टी एकता घोषणा
काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम र डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीबीच वैशाख २३ गते एकता घोषणा हुने भएको छ । नयाँ शक्ति निकट..
आजबाट सरे उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ’ ‘ग्रीन हाउस’ मा
काठमाडौं । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ’ बुधबारदेखि निवास सरेका छन् । उनी बस्दै आएकोे गैह्रीधारास्थित सरकारी निवासबाट लैनचौरस्थित उपराष्ट्रपतिको भवन ‘ग्रीन हाउस’मा सरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को गत भदौ २१ को..
रेलको लिगमा सेल्फी लिँदा रेलले किचेर दुई युवाको मृत्यु
एजेन्सी । भारतको हरियाणा राज्यको पानीपतमा रेलमार्गमा उभिएर सेल्फी लिँदै गरेका तीन जना किशोरलाई रेलले कुल्चिएको छ । भारतमा पछिल्लो समय रेलमार्गमा सेल्फी लिनेक्रममा धेरैको ज्यान जाने गरेको अनुसन्धानहरुले देखाएका..
राष्ट्रपतिलाई स्वास्थ्यमा समस्या पर्नुको कारण यस्तो रहेछ
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको स्वास्थ्यमा अचानक समस्या देखिएपछि चीनको राजकीय भ्रमण एक दिन छोट्याएर स्वदेश फर्किएकी छन् । बेइजिङको महत्वपूर्ण भेटघाट सकेर ल्हासा हुँदै फर्किने क्रममा राष्ट्रपतिको स्वास्थ्यमा समस्या..
भारतीयलाई नेपाली नागरिकता, जनप्रतिनिधि कर्मचारी र स्थानीयमाथि अनुसन्धान
झापा । भारतीयलाई नेपाली नागरिकता बनाउन कागजी प्रक्रिया मिलाइदिने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र स्थानीय अनुसन्धानमा तानिएका छन्। जिल्ला अदालत झापाले मुचुल्कामा सही गर्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका नाममा अनुसन्धान गर्न पक्राउ पुर्जी..
बालुवाटार बेच्नेका सूत्रधार विदेश फरार, मालपोतका तत्कालीन कर्मचारी पनि भागे
काठमाडौं । व्यक्तिको नाममा सारिएको बालुवाटारस्थित १४३ रोपनी जग्गा सरकारले रोक्का राखेर छानबिन थालेको ५० दिन भइसकेको छ । तर, जग्गा प्रकरणमा संलग्न एकजना पनि पक्राउ परेका छैनन् । प्रहरीको..
स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि राष्ट्रपति भण्डारी स्वदेश फिर्ता हुने
काठमाडौं । चीनको राजधानी बेइजिङमा भएको बेल्ट एन्ड रोड (बिआरआई) फोरमअन्तर्गत गोलमेच सम्मेलनमा सहभागी हुन गत बुधबार चीन प्रस्थान गरेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भोलि स्वदेश फर्किने भएकी छन् । स्वास्थ्यमा समस्या..
काठमाडौं । प्रदेश नम्बर १ को नाम र स्थायी राजधानी तोक्न नसकिरहेका बेला प्रदेश सरकारले धनकुटालाई सम्पर्क राजधानी तोकेको छ । मन्त्रिपरिषदको मंगलवार बसेको बैठकले धनकुटामा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय राख्ने निर्णय..
अस्पतालमै ३२ करोडको लागतमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बगैंचा
विराटनगर । नोबेल शिक्षण अस्पताल परिसरमा ठूलो लगानीमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बगैंचा र पार्किङ बन्ने भएको छ । अस्पताललाई व्यवस्थित् , स्वच्छ एवं मनमोहक वातावरण बनाउन नोबेलले रू ३२ करोडको लागतमा..
प्रचण्डको आक्रोश, भने–यही स्थिति रहिरहे नेकपाले सरकार बदल्न सक्छ !
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेश २ सरकारमाथि आक्रोश पोख्दै निकट भविष्यमा त्यहाँ आफ्नै पार्टीको सरकार बन्ने बताएका छन् । प्रदेश २ को सरकारले..
नेकपा बैठकमा बालुवाटार जग्गा बारे छलफल
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालय बैठकमा बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गाले प्रवेश पाएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे सुझाव दिन बोलाइएको बैठकमा नेताहरुले ललिता निवासको जग्गाबारे विभिन्न कुरा आएको..
बालुवाटारको जग्गा बैंकमा राखेर ३० अर्ब ऋण, राष्ट्र बैंक बेखबर
काठमाडौं । व्यक्तिको नाममा पुगेको बालुवाटारको अधिकांश सरकारी जग्गा बैंकको धितोमा रहेको खुलेको छ । तीव्रगतिमा किनबेच हुँदा सो जग्गा अहिलेसम्म कम्तीमा ३३४ कित्तामा चिरा पारिएको छ । जग्गाधनीहरूले विभिन्न बैंकमा..
इन्डोनेशिया चुनाव क्रममा २७० जनाभन्दा बढी कर्मचारीको मृत्यु
इन्डोनेशियामा एप्रिल १७ मा भएको निर्वाचनको मतगणनाका क्रममा २७० जनाभन्दा बढी कर्मचारीको मृत्यु भएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ताका अरीफ प्रियो सुसान्तोका अनुसार २७२ जना कर्मचारीको धेरै काम गर्नुपरेका कारण समस्या उत्पन्न..
नेपालको प्रस्ताव बीआरआईमा पारित, कहिले आईपुग्छ रेल काठमाडौंमा ?
बेइजिङ । चीनको बहुचर्चित एवं महत्वाकांक्षी अन्तर्राष्ट्रिय परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) को दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय फोरममा नेपालले राखेको प्रस्ताव पारित भएको छ । नेपालको प्रस्ताव समेटिएसँगै अब नेपाल र..
काम गरेर खान सक्ने नेपालीको संख्या ३४.२ प्रतिशत
काठमाडौं । नेपालमा काम गरेर खाने नेपालीको जनसंख्या ३४.२ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । २०७४७५ को तथ्याङ्कमा नेपालमा १५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेर समुहको जनसंख्या दुई करोड सात लाख..
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६.८ प्रतिशतले हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रक्षेपण गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म उपलब्ध तथ्यांक र बाँकि अवधिको अनुमानका आधारमा ६.८१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि..
देशमा बेरोजगार रहनेको संख्या ११.४ प्रतिशत मात्रै
काठमाडौं । देशको बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत पुगेको छ। नेपालमा १५ वर्षमाथि काम गर्ने उमेरको जनसंख्या दुई करोड आठ लाख छ। त्यसमध्ये ८० लाख युवा श्रम बजारमा उपलब्ध छन्। श्रमबजारमा उपलब्धमध्ये..
अख्तियारको कडाइपछि मालपोत र नापीका १७६ कर्मचारी पक्राउ
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेवाग्राहीको भेषमा मालपोत तथा नापी कार्यालयमा कर्मचारी परिचालन गरेपछि हालसम्म १७६ जना कर्मचारी निलम्बनमा परेका छन् । भ्रष्टाचार हुने अखडाको रुपमा परिचित मालपोत र नापी..
नेपाल लाइफले साढे ४८ प्रतिशत लाभांश बाँड्न बोलायो एजिएम
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा बीमा कम्पनीमध्ये पहिलो साधारण सभा डाक्ने कम्पनी बनेको छ। इन्स्योरेन्सले आगामी जेठ ४ गते शनिबार होटल दियालो वीरगञ्जमा बिहान ९ः३० बजे १९..
१२ मिनेटको फरकमा दुई भूकम्प, राजधानीबासी त्रसित
काठमाडौं । १२ मिनेटको फरकमा राजधानीमा दुई वटा भूकम्पको धक्का महसुश भएको छ । बुधबार बिहान ६ बजेर २९ मिनेट जाँदा पहिलो भूकम्पको धक्का महसुश भएकोमा त्यसको १२ मिनेटपछि ६ बजेर..
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाका ७७ जिल्ला कमिटीमध्ये तत्कालिन माओवादीले ३३ जिल्लाको अध्यक्ष र ४४ जिल्लाको सचिव पाएको छ । तत्कालिन एमालेले ४४ जिल्लामा अध्यक्ष र ३३ जिल्लामा सचिव पाएको छ..
विष्णु पौडेललाई रुपन्देहीबासीले नै क्षतिपूर्ति दिनूस् : गगन थापा
बुटवल । नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले व्यक्तिको नाममा गएको ललिता निवासको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री धेरै जग्गा जोगाउन लाग्नुभयो भने बालुवाटार पनि जाने उनको भनाइ..
काठमाडौं। ट्राफिक प्रहरीले उत्पत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन तीनवटा करिडोर सञ्चालनमा ल्याएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन तथा प्रदूषण नियन्त्रण कार्ययोजनाअन्तर्गत बालकुमारी पुल, गोपीकृष्ण पुल र भत्केको पुलमुनिको..
सात दिनभित्र ३९ अर्ब कर तिर्न एनसेललाई कर कार्यालयको सूचना
काठमाडौं । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेल कम्पनीले तिर्नु पर्ने पुँजीगत लाभकर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रूपैयाँ निर्धारण गरेको छ। टेलियासोनेरा कम्पनीले मलेसियाको एक्जियटा कम्पनीलाई एनसेलको ८०..
Results 1994: You are at page 13 of 67